အမှားသည်းခံပါလို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » အမှားသည်းခံပါလို့
Posted by ခင္ခ on Jul 3, 2012 in Society & Lifestyle | 15 comments
ရုံးဌာနတစ်ခုမှ မန်နေဂျာက စာအုပ်ဘီဒိုထဲက လုပ်ငန်းဖိုင်တစ်ခုကို မနေ့ကမှအလုပ်ဝင်လာတဲ့ ဝန်ထမ်းအသစ်ကိုယူခိုင်းတာ့၊ အဲဒီဝန်ထမ်းယူလာတဲ့ဖိုင်က ဖိုင်အမည်တူပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လရဲ့ဖိုင် ဖြစ်နေလို့ လက်ရှိလရဲ့ဖိုင်ကို မယူလာရကောင်းလားဆိုပြီး ရစရာမရှိအောင် ဆူပူကြိမ်းမောင်းပြုခဲ့လို့ အဲဒီဝန်ထမ်းအသစ်မိန်ခလေးက ရှက်လည်းရှက်၊သူလက်တွဲလုပ်ရမဲ့ မန်နေဂျာနဲ့အဆင်ပြေပါ့မလားတွေးပြီး နောက်နေ့အလုပ်မလာတော့တာတွေ့ဖူးပါတယ်။ (တကယ်ဆို ဖိုင်ထားသိုပုံတွေ၊ ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းသိမ်းပုံတွေ နားလည်အောင်အရင် သင်ပေးပြောပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းသစ်ကိုလက်တွဲခေါ်သင့်တာပါ။တစ်ချို့က ဝန်ထမ်းသစ်ဆိုပညာပြချင်ကြတာ ပါဝါပြချင်ကြတာလဲ လောကကြီးမှာရှိတာကိုး)
ကျောင်းတွေစဖွင့်လို့ တစ်ပတ်လောက်ဘဲစာသင်ရသေးတယ် သူငယ်တန်းကျောင်းသား ကလေး တစ်ယောက်ကို က ခ ဂ ဃ င ဆိုခိုင်းတာ ဆိုတဲ့ကလေးတစ်ယောက်က ဂ ကိုမေ့နေပြီး က ခ ဃ င ဘဲ အထပ်ထပ်ဆိုနေလို့ မေ့ရမလားဆိုပြီး ကြိမ်းလုံးနဲ့ အဲဒီကျောင်းသားကလေးကို ရိုက်ပြီးဆုံးမတော့ နောက်နေ့ကျောင်းသွားဖို့အမေက အိပ်ယာကနိုးတာကို ကလေးက ကျောင်းမတက်ချင်ဖူးလို့ အတင်းအကြပ်ငြင်းနေတာကိုလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။
ကုန်စိမ်းနဲ့ဟင်းသီးဟင်ရွက်ရောင်းတဲ့ကလေးမလေးက ဝယ်သူတွေက များပြားစွာစည်နေပြီး ရောင်းသူတစ်ယောက်ထဲလက်မလည်တဲ့အချိန်မှာ ကစွန်းရွက်နဲ့ချဉ်ပေါင်ရွက်မှားကမ်းပေး မိလို့ဈေးဝယ်သူက နှိမ့်ချပြောဆိုနေလိုက်တာကိုလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။
လမ်းဘေးလည်းမချမလွတ်မကင်း ရပ်ထားတဲ့ဆိုက်ကားကို လမ်းဘေးချပေးဖို့ လမ်းတောင်းရင်း ဟွန်တီးမိတဲ့ကားမောင်းသူကို ဘာလဲညာလဲနဲ့ ရိုက်မယ်တကဲကဲလုပ်လို့ ဘေးကသူတွေ ဝိုင်ဆွဲဖြန်ဖြေခဲ့တာကိုလဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။
ဘဏ်တစ်ခုမှာ ငွေတွေများလို့ စက်နဲ့ရေတွက်ပြီး ငွေတန်ဖိုးအရွက်မှားပါမှာကြောက်လို့ စိစစ်တဲ့ဝန်တဲ့ဝန်ထမ်းကို သူမယုံရကောင်းလားနဲ့ကြာလို့ ပြောဆိုနေတဲ့ သူဌေးတစ်ယောက် ကိုလည်းဘဏ်ငွေထူတ်ဖို့စောင်ရင်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။
လူလောကရဲ့ လူသက်တမ်းကိုကြည့်ရင် နှစ်၂၀ဝထက်ပိုနေရတဲ့သူမရှိပါဘူး၊ အဲဒီလို ရခဲလှတဲ့လူလောကမှာ တစ်ချို့တွေဟာ သူတပါးအမှားကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေတဲ့ နားလည်အောင် ရှင်းပြပြောဆို(သို့မဟုတ်)သွန်သင်ပေးဖို့ထက် ဆူဖို့၊ ဆဲဖို့၊ အပြစ်ပြောဟောက်ဖို့လောက် လုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ၊ သူတပါးအပြစ်ကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး အမှု့တစ်ခုကျူးလွန်နေသယောင် လုပ်နေကြတာတွေကိုတွေးမိပြီး အမှားသည်းခံပေး၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နားလည်အောင်ရှင်းပြလမ်းညွန်ပေးကြရင် ချစ်ခင်မှု့တွေ အဓွန့်ရှည်လို့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဝန်းကျင် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမှား သည်းခံပါလို့ တိုက်တွန်းပေးကြပါဗျာ။
ကိုခင်ခရေ …ကျွန်မအမြင်လေး ပြောရလျှင်လေ … အခုလို ဖြစ်ရတာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု မရှိသေးတာနဲ့ သတိလက်လွတ်ချိန်မို့လို့ ဖြစ်တာ ထင်ပါတယ် … ။
နောက်ပိုင်း လုပ်နေကြအလုပ်ဖြစ်ပြီး အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်တာကတော့ …. ပေါ့လျော့မှု ၊ မလေးစားမှုဘက်နွယ်သွားပြီပေါ့ … ။
အသစ်တစ်ယောက်ကို ခိုင်းတော့မယ်ဆို သေချာ ဂဃနဏသိအောင် သင်ပေးသင့်ပါတယ် … ။ ဒါတောင်မှ အသစ်လုပ်သူက အလေ့ကျင့်မရှိသေးတော့မှားနိုင်တာမျိုး .. ဖြစ်တာကြောင့် သင်ကြားပေးသူ စိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝဖို့ လိုပါတယ် …. ဘယ်လောက်သင်သင် မတတ်တာမျိုးကျတော့ … အတော်ထုံလို့ပဲပေါ့ … ။ ဟိဟိ
ဘူမှ အမှားနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးလေ..
ကျော်ဆို အဲဗားမှား..အဲဗားမှား….အဲဗား ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျိုး..
သတိ စနိုး ဆီမှာအလုပ်လာလျှောက်ရင် လုပ်သက်အတွေ့ကြုံ 1နှစ်ရှိမှ ခံမယ်လို့ ဒါပေမယ့်ခက်တာ ကစနိုးလည်းသူများဆီမှာအလုပ်လုပ်နေရတယ် အလုပ်တိုင်းဌာနဆိုင်ရာမှမဟုတ်ဘူး အပြင်ပုဂ္ဂလိကအလုပ်တွေလည်းအဲ့တိုင်း အလုပ်မှာကိုယ့်ထက်10ရက်လောက်စောဝင်ရင်တောင် ဆရာလုပ်ချင်နေတာ။
အခုခေတ်ကတော့ ကိုယ်မှားရင် ကိုယ်အပြောခံရတာပါပဲ။ အတတ်နိုင်ဆုံး မမှားအောင်တော့ ကြိုးစားရတာပေါ့။ သူများမှားတာကို ကိုယ်တွေက နားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်မှားရင်တော့ အပြောခံရမှာပဲပါလေ။ တကယ်တမ်း နားလည်နိုင်ပေးမဲ ့လူနဲ့ပြောချင်တဲ ့လူ ဘယ်သူပိုများလဲဆိုတာ ဒီပို ့စ်မှာ ပေါ်နေတာပဲလေ။ အလုပ်မှာတော့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲ တတ်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။ မသင်လို ့၊မတတ်လို ့ဆိုရင်တော့ အပြောခံရမှာ ကျိန်းသေသလောက်ပါပဲ။ လူအများစုက ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မှ မရှိကြတော့တာ။
အေကေကေအို ကွန်မင့်ကို ထပ်ဖြည့်ပြောမယ်ဗျာ
“ သူများအမှားကို အချိန်ပြည့် မျက်စိဒေါက်ထောက် လိုက်ကြည့်နေတဲ့ခေတ် ”
ကိုခင်ခရေ.. အပေါ်က ပို ့စ်ထဲမှာ ၊ ကိုယ်တွေ ့တစ်ခုလောက်တော့ ပါမယ် ထင်ပါရဲ ့။
သည်းညည်းခံ နိဗ္ဗာန်ရောက် လို့တောင် ဆိုထားတာဆိုတော့ …
ကိုခင်ခ ရဲ့ အတွေးအခေါ်လေးကို ထောက်ခံအားပေးသွားပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ အီးတုန်းနောက်က လိုက်ပြီးပြီ။
အင်း သည်းခံခြင်းကလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ …
အင်း ဟုတ်တယ် လူကြီးကမသိရင်